Hihaona Arabo Tokan-Tena
Mety ho tena mahafinaritra ny fihaonana teny arabo tokan-tena an-tserasera izay fihaonana tamin’ny olona mety tsy ho mafy be fifanarahana. Amin’ny fotoana na izany aza, dia mety hifidy ny hihaona olona amin’ny olona mba hijery raha simika misy eo amin’ny roa ianao.
Raha izany no ara-dalàna mba mahatsiaro ho menatra na somary sahiran-tsaina rehefa tonga ny fihaonana teny arabo tokan-tena ao amin’ny olona no ho an’ny voalohany, zava-dehibe ny mihaino ny voajanahary.
Matoky ny gut fihetseham-po rehefa hanapa-kevitra raha mba mihaona amin’ny olona na tsia
Rehefa nifidy ny hihaona amin’ny olona, ho azo antoka ny hihaona amin’ny vahoaka toerana miaraka amin’ny maro ny olona hafa manodidina.
Fihaonana tao ny toeram-ponenana voalohany tsy nisy hevitra lehibe
Koa, ho azo antoka fa ny namana sy ny na ny fianakaviana fantatrao izay ho sy ny hoe iza ianao, ny fivoriana. Ho an’ny soso-kevitra fanampiny tsidiho Arabo fandraisam-bahiny Soso-kevitra Faqs — fivoriana teny arabo tokan-tena dia afaka ny ho mahafinaritra sy mahafaly fahafahana ka mbola manaraka ny sasany fototra fiarovana ny soso-kevitra. Mamorona ny Arabo fandraisam-bahiny mombamomba azy amin’izao fotoana izao, ary hihaona amin’ny teny arabo tokan-tena
← Chat Maghreb chat DZ online chat arabo an-tserasera tsy misy fisoratana anarana
I arabia Saodita ny vehivavy sy ny fomba daty azy Iraisam-pirenena ny Fitiavana →